ဇင်ဘာဘွေ အဓိက အတိုက်အခံပါတီ ခေါင်းဆောင် ကွယ်လွန် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း နိုငျငံတကာသတငျး ဇင်ဘာဘွေ အဓိက အတိုက်အခံပါတီ ခေါင်းဆောင် ကွယ်လွန်
Zimbabwe opposition leader Morgan Tsvangirai speaks to the Associated Press after givingapress conference at his home in Harare, Zimbabwe Thursday, Nov. 16, 2017. Tsvangirai said President Robert Mugabe must resign and called foranegotiated, inclusive transitional mechanism as well as comprehensive reforms before elections. (AP Photo/Ben Curtis)
ဇင်ဘာဘွေ အဓိက အတိုက်အခံပါတီ ခေါင်းဆောင် ကွယ်လွန်
ဇင်ဘာဘွေ အဓိက အတိုက်အခံပါတီ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ မော်ဂန် ဆွာဂီရိုင်းဟာ တောင်အာဖရိက နိုင်ငံမှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်လို့ အတိုက်ခံပါတီ MDC ပါတီ တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။
အသက် ၆၅ နှစ်အရွယ် ဆွာဂီရိုင်းဟာ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အူမကြီး ကင်ဆာနဲ့ ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆွာဂီရိုင်းဟာ ဇင်ဘာဘွေ သမ္မတဟောင်း ရောဘတ်မူဂါဘီကို ဆန်ကျင်ပြီး နှစ်အတန်ကြာ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားခဲ့သူ ဖြစ်ကာ ထောင်လည်း ကျခဲ့ဖူးပါတယ်။
MDC ပါတီ ဒု ဥက္ကဋ္ဌ မက်ဇူရီက ဆွာဂီရိုင်းဟာ ပါတီအတွက် စံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သလို ဒီမိုကရေစီအတွက် ကြိုးပမ်းသူ တစ်ဦး ဆုံးရှုံးခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဆွာဂီရိုင်းဟာ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှာ MDC ပါတီကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး သမ္မတဟောင်း မူဂါဘီကို စိန်ခေါ်ဖို့ စတင်ကြိုးပမ်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဇငျဘာဘှေ အဓိက အတိုကျအခံပါတီခေါငျးဆောငျ ကှယျလှနျ
ဇငျဘာဘှေ အဓိက အတိုကျအခံပါတီ ခေါငျးဆောငျဖွဈသူ မျောဂနျ ဆှာဂီရိုငျးဟာ တောငျအာဖရိက နိုငျငံမှာ ကှယျလှနျသှားခဲ့တယျလို့ အတိုကျခံပါတီ MDC ပါတီ တာဝနျရှိသူတှကေ ပွောပါတယျ။
အသကျ ၆၅ နှဈအရှယျ ဆှာဂီရိုငျးဟာ ဝနျကွီးခြုပျဟောငျး တဈဦးဖွဈပွီး အူမကွီး ကငျဆာနဲ့ ကှယျလှနျသှားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ဆှာဂီရိုငျးဟာ ဇငျဘာဘှေ သမ်မတဟောငျး ရောဘတျမူဂါဘီကို ဆနျကငျြပွီး နှဈအတနျကွာ နိုငျငံရေးလှုပျရှားခဲ့သူ ဖွဈကာ ထောငျလညျး ကခြဲ့ဖူးပါတယျ။
MDC ပါတီ ဒု ဥက်ကဋ်ဌ မကျဇူရီက ဆှာဂီရိုငျးဟာ ပါတီအတှကျ စံပွပုဂ်ဂိုလျဖွဈသလို ဒီမိုကရစေီအတှကျ ကွိုးပမျးသူ တဈဦး ဆုံးရှုံးခဲ့တာ ဖွဈတယျလို့ မှတျခကျြပွုခဲ့ပါတယျ။ ဆှာဂီရိုငျးဟာ ၂၀ဝ၀ ပွညျ့နှဈမှာ MDC ပါတီကို တညျထောငျခဲ့ပွီး သမ်မတဟောငျး မူဂါဘီကို စိနျချေါဖို့ စတငျကွိုးပမျးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
Previous articleအရှေ့တောင်အာရှ စာပေ ညီလာခံ ထိုင်ဝမ်မှာ ကျင်းပမယ်
Next articleအကြမ်းဖက်သမား နှစ်ဦးရဲ့ မိဘတွေ လိမ်လည်မှုနဲ့ ထောင်ကျ